Mayelana NATHI - FAYGO UNION GROUP
IFAYGO UNION GROUP
IFAYGO UNION GROUP inezimboni ezintathu zamagatsha
Okokuqala i-FAYGOBLOW eyakha futhi yenze umshini wokubumba we-PET, i-PE njll. Umshini wokubumba we-FAYGO PET ungomunye wedizayini esheshayo futhi eyonga amandla emhlabeni.
Imboni yesibili yi-FAYGOPLAST, eyenza imishini ye-extrusion epulasitiki, kufaka phakathi umugqa wepulasitiki wepayipi we-extruding, umugqa wepulasitiki we-extruding line. Ikakhulukazi i-FAYGOPLAST ingahlinzeka ngejubane eliphezulu kuze kufike ku-40 m / min PE, umugqa wepayipi le-PPR.
Ifektri yesithathu yiFAYGO RECYCLING, ecwaninga ubuchwepheshe obusha ebhodleleni lepulasitiki, ekusetshenzisweni kabusha kwamafilimu nasekuhlinzekeni ngamathambo. Manje I-FAYGO RECYCLING ingenza kufika ku-4000kg / hr. Umugqa wokuwashwa kwamabhodlela e-PET, nolayini wokuwasha ifilimu owenziwe ngo-2000kg / hr
Manje iFAYGO UNION ithole ama-oda amaningi avela e-Alibaba yiTrade Assurance. Isiqinisekiso sethu sezohwebo singaphezu kwe-USD 2000,000. Ngakho-ke ukhululekile ukuthenga ku-FAYGO ngaphandle kokukhathazeka.
Manje iFAYGO UNION GROUP inamakhasimende angaphezu kwama-500 avela emazweni ahlukene, kufaka phakathi i-UK, iSpain, iJalimane, iNorway, iSwitzerland, i-Italy, iTurkey iRussia, njll. I-Saudi Arabia, i-Iran, iSyria, i-India, iThailand, i-Indonesia njll kusuka e-Asia, kanye namakhasimende amaningi ase-Afrika.
Kwemboni yethu itholakala Zhangjiagang edolobheni, ihlanganisa indawo 26,650 metres square. Kuthatha cishe amahora amabili ukushayela kusuka esikhumulweni sezindiza samazwe omhlaba i-SHANGHAI.
Umphathi wethu omkhulu uMnu. Figo wasungula inkampani yethu, ebizwa ngeZhangjiagang FaygoUnion Science and Technology Co. Ltd, lapho “Faygo” isho ikhasimende lokuqala elamsiza ngenkathi i- “Union” imele ukuthi abangane basebenza ndawonye ukwakha ikusasa elingcono. Kulo nyaka, Siqasha indawo yokusebenzela edolobheni laseJinfeng, edolobheni lase-zhangjiagang, futhi saqala ukukhiqiza imishini ye-plastic extrusion yamapayipi, iphrofayili, njll.
Ngonjiniyela abasha abajoyine nathi, saqala ukukhiqiza imishini yokuphinda isebenze kabusha epulasitiki, kufaka phakathi ukuchobozwa kwepulasitiki kanye nolayini wokuwasha, ulayini weplastiki wegranulating.
UMnu Figo wasungula enye inkampani ebizwa ngeSuzhou Yuda Air Compressor Co. Ltd., edayisa i-brand air compressor ephezulu eChina.
Ngenxa yentuthuko yenkampani, siqasha amanye amafemu amabili ukuze sikwazi ukuthola isikhala esanele sokukhiqiza nokugcina imishini.
Inkampani yethu ithenge ifektri enkulu, ebithatha indawo engamamitha-skwele angama-20000 futhi asisaziqashi izimboni. Ngaphezu kwalokho, sishintshe igama lenkampani laba yiJiangsu FaygoUnion Machinery Co, Ltd. elisedolobheni lasePhoenix, edolobheni laseZhangjiagang. Sibe namakhasimende amaningi ngokwengeziwe kusukela manje kuqhubeke.
Ngokwandiswa kwenkampani, sakhe umhlangano omusha wokusebenzela nehhovisi emhlabeni wethu.Ngaphezu kwalokho, sisungule ukubambisana okuzinzile namakhasimende avela kuwo wonke umhlaba.
Sithuthele ehhovisi elisha sathola amalungelo obunikazi ayi-15 athola isitifiketi sikazwelonke.
Sathenga enye ifektri, ebisendaweni eyi-1km kuphela ukusuka kwi-workshop yamanje lapho eminye yemishini yethu izokhiqizwa khona kufaka phakathi ipayipi lepulasitiki 、 iphrofayili extrusion umshini, imishini yokuphrinta kabusha imfucuza, umshini wokubumba igalelo, umshini wokugcwalisa, umshini wokucindezela umoya, umshini wokusika amabhodlela, can / umshini wokufaka uphawu lwamabhodlela.
Ngesikhathi sokuqubuka kweNovel Coronavirus, inkampani yethu yaqala ukukhiqiza umshini wendwangu we-PP oncibilikile wendwangu yemaski, umshini wobuso obuso obuzuze impumelelo enkulu futhi osukhiqize imaski ngokuqinile ezimbonini eziningi zamakhasimende.
Imithi egxilile [2006- 2012]
Imithi egxilile [2014-]